တမူးမြို့နယ်တွင် (၃)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်လေးအား အသက်(၁၃) ခန့် အရွယ်လူငယ်မှ မဖွယ်မရာ ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား…….. – EverBestMM
တမူးမြို့နယ်တွင် (၃)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်လေးအား အသက်(၁၃) ခန့် အရွယ်လူငယ်မှ မဖွယ်မရာ ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား……..
Ever Y | December 6, 2019 | News | No Comments
၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၀၃ ရက်နေ့တွင် တမူးမြို့နယ် ကျွန်းတောရေရှင်ကျေးရွာ၌ (၃)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်လေးအား အသက်(၁၃) ခန့် အရွယ်လူငယ်မှ မဖွယ်မရာ ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ တမူးမြို့နယ်၊ ခမ်းပါတ်နယ်မြေရဲစခန်းတောင်ဘက် (၁၂)မိုင်ခန့်အကွာ ကျွန်းတောရေရှင်ကျေးရွာ တွင် ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၀၃ ရက်နေ့ နံနက်(၅)နာရီခန့်အချိန်၌ တရားလိုသည်နေအိမ်မှ စပါးရိတ်ထွက်သွားချိန်တွင်နေအိမ်တွင် သားအကြီးဖြစ်သူမောင်သားကို(၉)နှစ်၊မောင်ရဲရင့်ကို(၆)နှစ်နှင့်သမီးအငယ်ဆုံးဖြစ်သူ မ…….(၃)နှစ်(၃)လတို့သာကျန်ရှိခဲ့ပြီး ညနေ(၆)နာရီခန့်အချိန်တွင် နေအိမ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်တွင် တရားလို၏သမီးဖြစ်သူ မ……. မှ “မေမေသမီးကို ကိုမင်းချစ်ဦးမှ ဖုတ်ဖုတ်ကိုလုပ်တယ်”ဟုခြေဟန်လက်ဟန်ရောပါပြီး ပြောပြသဖြင့် တရားလိုမှ သမီး၏လိမ္မော်ရောင်ဘောင်းဘီအားချွတ်ကြည့်ရာ မိန်းမအင်္ဂါမှာ နီရဲနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး သားအလတ်ဖြစ်သူ ရဲရင့်ကိုအား ဟုတ်သလားဟုမေးရာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း၊နေ့လည်(၁၁)နာရီကျော်ခန့် သားကြီးဖြစ်သူမောင်သားကို ရေသွားခပ်နေစဉ် သားအလတ်နှင့် သမီးအား မင်းချစ်ဦးမှ ၎င်း၏နေအိမ်ပေါ်သို့ခေါ်ကာ သမီးဖြစ်သူအား နေအိမ်ရှေ့ခန်းတွင်အိပ်ခိုင်းပြီး မင်းချစ်ဦးမှ ယောကျာ်းတန်ဆာဖြင့် ထိုးသွင်းသည်ကို မြင်တွေ့ရကြောင်း၊
သားအကြီးဖြစ်သူမောင်သားကိုအား ထပ်မံမေးရာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း မင်းချစ်ဦးမှ ဂျင်ပေးမည်ဟုပြော၍ ရေခပ်ခိုင်းသဖြင့် ရေသွားခပ်ပြီးပြန်လာစဉ် မင်းချစ်ဦးအိမ်၌ သမီးဖြစ်သူငိုနေသဖြင့် သားကြီးဖြစ်သူမှ သမီးအားမေးရာ သားလတ်နှင့် သမီးအား မင်းချစ်ဦးမှ ၎င်း၏နေအိမ်ပေါ်သို့ခေါ်ကာ သမီးဖြစ်သူအား နေအိမ်ရှေ့ခန်းတွင်အိပ်ခိုင်းပြီး မင်းချစ်ဦးမှ ယောကျာ်းတန်ဆာဖြင့် ထိုးသွင်းသဖြင့် ငိုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် သမီးဖြစ်သူအား သားမယားဖြင့်ပြုကျင့်သူ မင်းချစ်ဦး (၁၃)နှစ်ခန့်(ဘ)ဦးဇော်ဝင်း၊(၇)တန်း၊ဗမာ၊ကျွန်းတောရေရှင်ရွာ၊ခမ်းပါတ်မြို့နေသူအား အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါ အမှုမှ တရားခံအား ခမ်းပါတ်နယ်မြေစခန်း တွင် (ပ)၃၁/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ(၃၇၆) ဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရသည်။
၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၀၃ ရက္ေန႔တြင္ တမူးၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းေတာေရရွင္ေက်းရြာ၌ (၃)ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ေလးအား အသက္(၁၃) ခန႔္ အရြယ္လူငယ္မွ မဖြယ္မရာ ျပဳက်င့္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္၊ ခမ္းပါတ္နယ္ေျမရဲစခန္းေတာင္ဘက္ (၁၂)မိုင္ခန႔္အကြာ ကၽြန္းေတာေရရွင္ေက်းရြာ တြင္ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၀၃ ရက္ေန႔ နံနက္(၅)နာရီခန႔္အခ်ိန္၌ တရားလိုသည္ေနအိမ္မွ စပါးရိတ္ထြက္သြားခ်ိန္တြင္ေနအိမ္တြင္ သားအႀကီးျဖစ္သူေမာင္သားကို(၉)ႏွစ္၊ေမာင္ရဲရင့္ကို(၆)ႏွစ္ႏွင့္သမီးအငယ္ဆုံးျဖစ္သူ မ…….(၃)ႏွစ္(၃)လတို႔သာက်န္ရွိခဲ့ၿပီး ညေန(၆)နာရီခန႔္အခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တရားလို၏သမီးျဖစ္သူ မ……. မွ “ေမေမသမီးကို ကိုမင္းခ်စ္ဦးမွ ဖုတ္ဖုတ္ကိုလုပ္တယ္”ဟုေျခဟန္လက္ဟန္ေရာပါၿပီး ေျပာျပသျဖင့္ တရားလိုမွ သမီး၏လိေမၼာ္ေရာင္ေဘာင္းဘီအားခၽြတ္ၾကည့္ရာ မိန္းမအဂၤါမွာ နီရဲေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး သားအလတ္ျဖစ္သူ ရဲရင့္ကိုအား ဟုတ္သလားဟုေမးရာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ေန႔လည္(၁၁)နာရီေက်ာ္ခန႔္ သားႀကီးျဖစ္သူေမာင္သားကို ေရသြားခပ္ေနစဥ္ သားအလတ္ႏွင့္ သမီးအား မင္းခ်စ္ဦးမွ ၎၏ေနအိမ္ေပၚသို႔ေခၚကာ သမီးျဖစ္သူအား ေနအိမ္ေရွ႕ခန္းတြင္အိပ္ခိုင္းၿပီး မင္းခ်စ္ဦးမွ ေယာက်ာ္းတန္ဆာျဖင့္ ထိုးသြင္းသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊
သားအႀကီးျဖစ္သူေမာင္သားကိုအား ထပ္မံေမးရာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း မင္းခ်စ္ဦးမွ ဂ်င္ေပးမည္ဟုေျပာ၍ ေရခပ္ခိုင္းသျဖင့္ ေရသြားခပ္ၿပီးျပန္လာစဥ္ မင္းခ်စ္ဦးအိမ္၌ သမီးျဖစ္သူငိုေနသျဖင့္ သားႀကီးျဖစ္သူမွ သမီးအားေမးရာ သားလတ္ႏွင့္ သမီးအား မင္းခ်စ္ဦးမွ ၎၏ေနအိမ္ေပၚသို႔ေခၚကာ သမီးျဖစ္သူအား ေနအိမ္ေရွ႕ခန္းတြင္အိပ္ခိုင္းၿပီး မင္းခ်စ္ဦးမွ ေယာက်ာ္းတန္ဆာျဖင့္ ထိုးသြင္းသျဖင့္ ငိုေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ သမီးျဖစ္သူအား သားမယားျဖင့္ျပဳက်င့္သူ မင္းခ်စ္ဦး (၁၃)ႏွစ္ခန႔္(ဘ)ဦးေဇာ္ဝင္း၊(၇)တန္း၊ဗမာ၊ကၽြန္းေတာေရရွင္ရြာ၊ခမ္းပါတ္ၿမိဳ႕ေနသူအား အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္တန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။အဆိုပါ အမႈမွ တရားခံအား ခမ္းပါတ္နယ္ေျမစခန္း တြင္ (ပ)၃၁/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ(၃၇၆) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။
ပဲခူးမှာ ကလေးသူခိုးဆိုပြီး ရိုက်နှက်ခံရသူ ဘယ်မျက်လုံးကွယ်………….
ချင်းပြည်နယ် ပညာရေးဝန်ထမ်းများမှ အသတ်ခံရသည့်ဆရာမအတွက် ငွေကျပ် သိန်း ၆၀ ကျော် ထောက်ပံ့……
မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့Top5မှာ ကျန်ရှိနေမယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ…….
မွနျမာပွညျကို ရောကျခဲ့ဖူးတဲ့ အီသီယိုးပီးယားဘုရငျ
အမြိုးသား(၁၆)ဦးရဲ့ တစျလှညျ့စီယုတျမာမှုကို ခံခဲ့ရပွီး သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ (၈)နှစျသမီးလေး
စားတော်ပဲပြုတ်စားခြင်း အကျိုး ကျေးဇူးများ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှု စိုးရိမ်နေကြချိန် ဟောင်ကောင်မှာ လက်နက်ကိုင်အမျိုးသားသုံးဦးက အိမ်သာသုံးစက္ကူလိပ် ရာနဲ့ချီကို ခိုးယူသွား
စိမ်းလဲ့တင်ကိုဝေဖန်နေသူတွေ ဒီထက်ဆိုးလာရင် ဖေဖေကတရားစွဲမယ်လို့ ပြောပြလာတဲ့ နေခြည်ဦး
ဖူးခက်တွင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၁ ဦး ထိုင်းဘတ် ၆ သန်းဖိုး ထီပေါက်
ခေတ်နဲ့သစ်လေးကိုစတွေ့မိလိုက်တဲ့အချိန် ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘဝလေးကို လိုချင်သွားတဲ့ နေခြည်ဦး
Copyright © 2020 EverBestMM.